Kwenzekani uma ngishiya okweletayo engiphathekile ngenxa yokuqothuka kwami? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Imibuzo Evame Ukubuzwa/ Kwenzekani uma ngishiya okweletayo engiphathekile ngenxa yokuqothuka kwami?
Kuya ngokuthi yisiphi isikhathi sokuqothuka esifakwe futhi uma unezimpahla. Kusahluko sokuqothuka kwe-13 esahlukweni nakwindlela esaqhubeka ngayo ukuqothuka kwe-7 lapho kunempahla, isikweletu ngeke sakhishwa. Okusho ukuthi usazoba kulokho kubamba ukukhokha ukuqothuka,
Kusahluko sokungasebenzi kwempahla i-7, isikweletu sizokhishwa inqobo nje uma kungenye yezindlela ezijwayelekile zesikweletu esithethelelwe ekuqothulweni okufana nezikweletu zezokwelapha, amakhadi wesikweletu, abolekiso lwezimoto ezenzakalelayo ezimotweni eziphindaphindekayo nokunye.